Waa sidee xaaladda dhaawaca Ingazio Abate? – Gool FM
Waa sidee xaaladda dhaawaca Ingazio Abate?
(Milano) 09 Jan 2017 – Waxaa xalay isagoo dhaawac ah ciyaarta ka baxay kabtan KMG ah ee kooxda AC Milan ee Ignazio Abate, kaasoo uu jilinka ka haraatiyay daafaca kooxda Cagliari ee Bruno Alves.
ADriano Galliani ayaala hadlay hilinka rasmiga ah ee Rosonneri ee Milan TV isagoo leh: “Abate waxaa jilibka ka gaartey jug culus oo uga dhacday koofida jilibka, dhakhaatiirtuse way ku rajo wayn yihiin inuusan jab jirin, waa la baari doonaa xaaladdiisa si taxaddar leh. ”
Abate ayaa laga yaabaa in la nasiyo kulanka Coppa Italia ee ay Khamiista la yeelanayaan kooxda Torino, balse wuxuu soo noqon karaa kulanka ay Isniinta ku wajahayaan isla Torino ee horyaalka, wax kastaba lkn waxay ku xiran yihiin natiijada kasoo baxda baaritaanka taasoo ay ka dhur sugayaan Rossoneri iyo Vincenzo Montella, maaddaama uu Abate yahay laacibka ugu waaya aragsan Milan-ta cusub.
Maxkamad Swedish oo ganaax u jartay nin Ibrahimovic ku eedeeyay inuu daroogaysan jirey!